GOOGLE DRIVE မှဒေါင်းလုပ်လုပ်လုပ်နည်း - GOOGLE က - 2019
Google Drive ကိုဖိုင်များကို Download
WebMoney ပိုက်ဆံအိတ် replenish ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒီအခရက်ဒစ်ကဒ်, စတိုးဆိုင်များတွင်အထူးဆိပ်ကမ်း, ဆဲလ်ဖုန်းဥပဒေကြမ်းများနှင့်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကကော်မရှင်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရက်တွင်ရွေးချယ်ထားသောနည်းလမ်းပေါ် မူတည်. အလွန်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ WebMoney အကောင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏လက်ရှိရရှိနိုင်အမျိုးအစားအားလုံးစဉ်းစားပါ။
WebMoney replenish လုပ်နည်း
တစ်ခုချင်းစီကိုငွေကြေးအဘို့, ရန်ပုံငွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငွေကြေး analogue Bitcoin (WMX) သိုလှောင်ထားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်သိုလှောင်မှုနှင့်ညီမျှသင့်လျော်သောအကာအကွယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အားသွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာတို့ကို။
Method ကို 1: အဆိုပါဘဏ်ကဒ်
WMX (Bitcoin) နှင့် WMG (ရွှေဘား) ထက်အခြားမည်သည့်ငွေကြေးကိုတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်မှာသင့်ပိုက်ဆံ ထား. , ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဒီအွန်လိုင်း, အိမ်၏နှစ်သိမ့်ကနေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင် 0% ၏အပြောင်းအရွှေ့ကော်မရှင်နှင့်လွှဲပြောင်းချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2800 ရူဘယ် (သို့မဟုတ်ညီမျှ) အောက်ကပမာဏအပေါ် 2017 ကော်မရှင်ရဲ့အစမှာ 50 ရူဘယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် 2500 ရူဘယ်၏အကောင့်ကိုလွှဲပြောင်းလျှင်, သာ 2450 WMR အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်နှင့် 3000 လျှင်, ဒါကြောင့် 3000 WMR နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
အကောင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုမီသေချာပေါက် WebMoney လော့ဂ်။
သင်ခန်းစာ: အဆိုပါ WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်ထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးပြီး WebMoney အကောင့် replenish မှဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
အဆိုပါဓာတ်အားစာမျက်နှာကိုသွားပါအဆိုပါဓာတ်အားငွေကြေးကိုကို select (ဥပမာအဘို့, WMR ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်) ။ ထို့နောကျ "ဖို့အချက်ကို selectခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူ"ထိုအခါ"အွန်လိုင်းအကြွေးဝယ်ကဒ်နှင့်အတူ".
"သင့်လျော်သောနယ်ပယ်များတွင်ငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ, ကတ်အရေအတွက်သည်၎င်း၏ကြာချိန်, CVC ကုဒ် (ကဒ်၏နောက်ကျောအပေါ်သုံးဂဏန်း) နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါWMR Buy".
ထိုနောက်မှသင်သည်သင်၏ဘဏ်များ၏စာမျက်နှာသို့မဟုတ်အတည်ပြုချက်စာမျက်နှာဗီဇာသို့မဟုတ် MasterCard ကိုအရောင်းအပေါ်သွားပါ။ SMS ကိုလာလတံ့သောစကားဝှက်, ရိုက်ထည့်ဖို့ရှိပါတယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီစကားဝှက်ထဲသို့ဝင်သည်ကိုတပြိုင်နက်စစ်ဆင်ရေးကိုအတည်ပြုကြလိမ့်မည်, ထိုပိုက်ဆံသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်သို့ရဖို့။
Method ကို 2: Terminal ကိုသို့မဟုတ် ATM စက်များပြီးနောက်
သငျသညျဤဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့သော terminal ကိုကွန်ရက်များကိုရည်ညွှန်း, terminal ကိုတဆင့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကို replenish ခြင်းမပြုမီ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ Terminal ကို QIWI ပိုက်ဆံအိတ်သုံးပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအများဆုံးစူပါမားကက်များနှင့်အသေးစားစျေးဆိုင်၌တွေ့နေကြပါတယ်။
"ကိုနှိပ်ပါန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေမှု"ပြီးတော့ select လုပ်ပါ "E-commerce"။ လူအပေါင်းတို့သည်န်ဆောင်မှုတွေထဲမှာ WebMoney ရ။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောကို item ပါလျှင်, ရှာသုံးပါ။
"ပိုက်ဆံအိတ်၏နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပါနဲ့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရှေ့သို့"။ အဆိုပါဟန်းဆက်ကို SMS ကအထူးကုဒ်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ (အားလုံးကိစ္စများတွင်မလိုအပ်ပါ) သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလက်ကွက်ခုံသုံးပြီးသက်ဆိုင်ရာလယ်သို့ကြောင့်ရိုက်ထည့်ပါ။ terminal ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းများတွင်ထားပါ"အခပေး"။ အဆိုပါမျက်နှာပြင်ကော်မရှင်အမြင်ဝင်ပမာဏကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, ပိုက်ဆံကသင်၏ပိုက်ဆံအိတ် WebMoney ထဲသို့ကျပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကဘဏ်များဟာသူတို့ရဲ့ ATM စက်များမှတစ်ဆင့် WebMoney ငွေထားရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေး။ ဤသည်သာရုရှားနိုင်ငံအဘို့အမှန်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမီနယ်၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့နီးပါးတူညီလှပါတယ်။ ထိုသို့သောအခွင့်အလမ်းပေးဘဏ်များ၏စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်, ပိုက်ဆံအိတ် replenish မှဘဏ်တွေကိုသွားပါ။
Method ကို 3: အင်တာနက်ကဘဏ်လုပ်ငန်း
ရုရှား, ယူကရိန်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်အားလုံးသည်အဓိကဘဏ်များအွန်လိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စနစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု tools များရှိသည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ထိုကဲ့သို့သောစနစ်၏အကျော်ကြားဆုံးကတော့ Sberbank အွန်လိုင်း, ယူကရိန်းသည် - Privat24 ။ ဒါကြောင့်ဤစနစ်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ Webmoney အကောင့်ဖို့ရန်ပုံငွေထားရန်ပါစေ။ ရုရှားဘဏ်များ၏ကော်မရှင်များနှင့်အတူဘဏ္ဍာရေးအာမခံချက်၏ဗျူရိုမှာတှေ့နိုငျပါသညျ။
တစ်ခုချင်းစီကိုအင်တာနက်ဘဏ်စနစ် WebMoney ပိုက်ဆံအိတ် replenish မှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် algorithm ကိုရှိပါတယ်။ WMR-ပိုက်ဆံအိတ်အဘို့အားလုံးနည်းလမ်းများဘဏ်ရဲ့ website နှင့်ငွေပေးချေမှုန်ဆောင်မှုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ WMU-ပိုက်ဆံအိတ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါကအင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များကိုဘယ်လို WMU ဝယ်ယူများ၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, စနစ် Sberbank အွန်လိုင်း၏အသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစားပါ။
"ဟုအဆိုပါစနစ်အတွက် Log နှင့်ကိုသွားလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေ"။ ရှာဖွေပါ"အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံ"ထိုအခါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအခါ button ကို click "Continue" ဖွင့်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, အားလုံးသော posts စိစစ်အတည်ပြုပြန်ပြသပါလိမ့်မည်။ ဒေတာအားလုံးမှန်လျှင်, "ကိုထပ်ကလစ်နှိပ်ပါဆက်လက်ဆောင်ရွက်".
code ကိုများအတွက်ဖုန်းပေါ်မှာ။ သင့်လျော်သောလယ်ပြင်၌ရှိသောကြောင့် Enter နှင့် "Continue" ကိုထပ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းသည်, ငွေကိုသင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်သည်တံဆိပ်ကို click နိုင်ပါတယ် "ပုံနှိပ်ပါစစ်ဆေးမှုများ" ။
Method ကို 4: အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံ
အဲဒီမှာ WebMoney Exchange ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အီလက်ထရောနစ်ငွေကိုတပ်လဲလှယ်သည်။ PayPal နှင့် Yandex မှခေါင်းစဉ်ဆိုင်းဘုတ်များ WebMoney ၏လက်ရှိရရှိနိုင်လဲလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, WMR မှ Yandex.Money ဖလှယ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။
စာမကျြနှာပျေါတှငျ WMR Yandex နှင့်အပြန်အလှန်များအတွက် Exchange service ကိုလဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးပါ။ ထိုနညျးတူ, သင်သည်သင်၏လက်ရှိငွေကြေးပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ထိုအခါသင်သည် Yandex.Money များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အခြားအသတင်းထောက်များထံမှအကြံပြုချက်များမြင်လိမ့်မည်။ ညာဘက်စားပွဲအာရုံစိုက်။ ကျနော်တို့ကလိုအပျကွောငျးလယ်ကွင်း "အဲဒီမှာ RUB"ထိုအခါ"ကျနော်တို့ WMR ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ "ပထမသတင်းထောက် Yandex အားဖြင့်အပေါ်လွန်ခြင်းကိုခံရမည်အဖြစ်ညွှန်ပြ, ဒုတိယအတွက်ဖြစ်ပါတယ် - ကဆန္ဒရှိအဆိုပြုချက်ကိုကို Select လုပ်ပါကသင်၏ WebMoney အကောင့်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပေါ်မှာ click နှိပ်လိမ့်မယ်မည်မျှရူဘယ် ..
ပထမဦးစွာစနစ်ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏စာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးသတင်းထောက်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, "ပိုက်ဆံအိတ်များ၏စာရင်းထဲကနေရွေးချယ် click နှိပ်ပေါင်း။ "ဟုအဆိုပါအခန်းတွင် pop-up menu ကိုခုနှစ်တွင် "ပိုက်ဆံအိတ်" "ဟုအဆိုပါစကားလုံးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါတည်ထောင်".
ဤသည်ရန်ပုံငွေများကိုလွှဲပြောင်းရန်ခလုတ်ဖွင့်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါသင် Yandex.Money စနစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းအဆိုပြုချက်တို့တွင်ပမာဏပေါ်သင်တို့အဘို့အညာဘက်သောတဦးတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလျှင်, "ပေါ်တွင် click လုပ်WMR Buy"Yandex များအတွက်စာမျက်နှာ Exchange ၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်။
RUB အတွက် Yandex ငွေပမာဏ;
WebMoney WMR ပမာဏကိုပြခြင်း,
အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို - ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို;
အချိန်မပို့ (သင် Yandex.Money အကောင့်ဖို့ပိုက်ဆံပေးပို့တံ့သောအဘို့) နှင့် (WebMoney အပေါ်) ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိ;
ဤအဒေတာထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသောအခါ "မှတ်သား box ကို tick ကျေးဇူးပြုပြီးငါသဘောတူ... "နဲ့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ"လျှောက်ထား"။ Next ကိုသင့်ရဲ့အခွအေနမှသဘောတူရန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ သင်ကအကောင့် Yandex ငွေလွှဲနှင့်သင့် WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်ဤငွေပမာဏကိုစောင့်ရပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 5: မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့အကောင့်နှင့်အတူ
5% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို - ဒါဟာတစ်ချိန်ကမှာဤကိစ္စတွင်အတွက်မဟုတ်ဘဲကြီးမားသောကော်မရှင်, အဲဒီလို့ပြောသင့်ပါတယ်။
replenishment နည်းလမ်းများနှင့်အတူစာမျက်နှာကိုသွားပါ။ "တစ်ဦးငွေကြေးကိုကို Select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်ရွေးချယ်ခြင်းဆဲလ်ဖုန်းဥပဒေကြမ်းများနှင့် ပတ်သက်.။ "ဥပမာအားဖြင့် WMR ကိုရွေးချယ်ပါ။
"ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပြန်. ဖြည့်"ခေါငျးစဉျအောကျအောက်မှာ"WebMoney ပိုက်ဆံအိတ် Replenish".
အဆိုပါရန်ပုံငွေများ debited ပါလိမ့်မည်သည့်အနေဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်;
ဘေးက Webmoney အကောင့်ပေါ်တွင်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။
Method ကို 6: ငွေစာသင်ခုံများတွင်
လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏စာရင်းတစ်ခုနှင့်အတူစာမျက်နှာကိုသွားပါ "ဟု Messenger ကို" နှင့် "Euroset" ဖြေရှင်း။ အဆိုပါဟိုက်ပါလင့်ခ်ပစ်မှတ်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဥပမာ, "ကို selectတမန်".
လက်လီကွန်ယက်ကိုစာမျက်နှာတွင်ကမ္ပည်းက default သတ်မှတ်ထားသောဒေသနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်မြို့ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်ရွေးချယ်ထားမွို့၌စျေးဆိုင်များအားလုံးလိပ်စာများကိုမြေပုံပေါ်တွင်ပြသပါလိမ့်မည်။
အဲဒီနော, သင် WebMoney တက်ထိပ်ဆုံးချင်သောတိုင်ပင်ပြောပြ, လက်ခံငွေပေးချေ၏ရွေးချယ်ထားသောအချက်ကိုသွား, ငွေသားအတွက်ပိုက်ဆံ၏လက်ယူပါ။ အဆိုပါအော်ပရေတာလာမယ့်ဘာလုပ်ရမှန်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
Method ကို 7: ဘဏ်ခွဲများတွင်
ပထမဦးစွာနောက်တဖန် "replenishment နည်းလမ်းများ, select လုပ်ပါငွေကြေးနှင့်အတူစာမျက်နှာကိုသွားပါနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအဆိုပါဘဏ်ခွဲမှတစ်ဆင့်".
"လာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်မှ select လုပ်ပါငွေစားပွဲခုံမှာငွေသား... "(လာမယ့်သူကတစ်ဦးအမှတ်အသားထား) ။
ထိုအခါသိုက်၏ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အထက်ပါဘာသာပြန်ချက်သတင်းအချက်အလက်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ စာနယ်ဇင်း "နောက်ထပ်".
"ဟုအဆိုပါစကားလုံးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါငွေပေးချေမှုအမိန့်"ပုံစံ print ထုတ်ပါ။ ဒါဟာရုံ, ပုံစံ print ထုတ်မှအနီးဆုံးဘဏ်ကိုသွားငွေသားအတွက်ဝန်ထမ်းဘဏ်ရဲ့ပိုက်ဆံပေးနဲ့ပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့ငွေသွင်းငွေထုတ်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
Method ကို 8: ငွေလွှဲလုပ်ငန်း
WebMoney စနစ်ကလည်းငွေကိုလွှဲပြောင်းစနစ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် - Western Union, ဆက်သွယ်ရန်, Anelik နှင့် UniStream ။ တဖန်သင်တို့ Yandex ငွေနှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးနှင့်ဝသကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအမှုအဘို့အတိအကျတူညီဝန်ဆောင်မှု Exchange ။
"replenishment နည်းလမ်းများနှင့်အတူစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ငွေကြေးကိုရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါငွေလွှဲ"။ အလိုရှိသောငွေလွှဲစနစ်တွေအောက်မှာအောက်ပါစာမျက်နှာတွင် button ကို click"လျှောက်လွှာကို select... "သင်တို့ရှိသမျှသည်လက်ရှိလျှောက်လွှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုခငျြဘူးဆိုရငျ။ , ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ"သစ်တစ်ခု application ကိုသွင်းထား"။ ရန်ပုံငွေအတွက် Yandex ပြောင်းရွှေ့ကြသောအခါငါတို့သည်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအတူလျှောက်လွှာကိုဖန်တီးရန်အတိအကျတူညီလယ်ပြင်ရှိလိမ့်မည်။
သငျသညျလက်ရှိလျှောက်လွှာကိုကြည့်ရှုဖို့ရှေးခယျြလျှင်, သင်ရရှိနိုင် applications များစာရင်းတစ်ခုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ လိုချင်သောစာရင်းနှင့်ငွေပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဤနည်းလမ်းကိုလည်း replenishment WMR အဘို့ကိုသာရရှိနိုင်ပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့အကောင့်မှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်, သင်ရုရှား Post ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်လွှဲပြောင်းအချိန် (စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေမတွက်ပါ) အကြောင်းကိုငါးခုအလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းယူပါလိမ့်မယ်။
ငွေလွှဲစာမျက်နှာတွင်, ရုရှား Post ကို၏အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်စည်ပင်လိမ့်မည်သည့်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဤအမှုကိုပြုသောအခါ, "ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအမိန့်မှ".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, အနီရောင်ခရေပွင့နှင့်အတူမှတ်သားရှိသမျှတို့သည်နယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပါ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို" ဖွင့်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်။
လျှောက်လွှာကိုပြီးစီးခဲ့သည်ကိုသင်ယခုသူ၏လက်နက်၌သငျရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ရုရှား Post ကိုများ၏ဌာနခွဲကိုသွားရာနှင့်အတူစက္ကူဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောကျ "ဟူသောစကားလုံးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပုံစံကို download လုပ်ပါရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ".
ထို့နောက်ပုံစံ print ထုတ်ကာဝန်ထမ်း-mail ကိုကပေး, ပိုက်ဆံနှင့်အတူသူတို့သင့်အကောင့်ရသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်စာတိုက်ကိုသွားပါ။
Method ကို 10: အထူးကဒ်များ
ဤနည်းလမ်းကိုအမျိုးမျိုး၏ပိုက်ဆံအိတ်ဖြည့်စွက်ရန်မရရှိနိုင်ပါသည်, သငျသညျရုရှား, ယူကရိန်း, စတိုးနီးယားနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်၏ပိုင်နက်မှာသူတို့ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။ ဤကဒ်များဝယ်ယူရန်သာနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်:
အဆိုပါ WebMoney ကဒ်ကုန်သည်တွေကိုသွားပါ။ သင့်ရဲ့မြို့ Enter နှင့်သင့်မွို့၌သင်တို့သည်ဤကဒ်များကိုဝယ်နိုင်ဘယ်မှာကြည့်ပါ။ ရုံစတိုးဆိုင်ကိုသွားနှင့်ရွေးချယ်ထားကဒ်ကိုဝယ်ပြီးနောက်။
သင့်အိမ်မှအမိန့်စာမကျြနှာကိုမြေပုံသို့သွားပါ။ သင့်ရဲ့အမြင်မှာအကောင်းဆုံးကုန်သည်ကို Select လုပ်ပါ, ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ကယင်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်လှုံ့ဆော်ပေး။ (ထိုပေးပို့ရန်လိပ်စာသတ်မှတ်ပါ) လိုချင်သောမြေပုံပေါ်တွင်အဲဒီမှာ Click နှင့်သင့်ကြိုတင်မှာကြားထားစေပါ။
အဆိုပါကဒ်ကိုသက်ဝင်သည့် Paymer ဝန်ဆောင်မှု site ကိုသွားပါ, ပုံသဏ်ဌာနျကနေရှိရာဝယ်ယူကတ်များ, ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အခန်းထဲမှာသော့ခ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်။ "ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါငြိမ်းအေး"ဖွင့် window ၏အောက်ခြေတွင်။
Method ကို 11: တတိယပါတီခွဲဝေမှုန်ဆောင်မှုများ
အဲဒီမှာ Third-party ခွဲဝေမှုန်ဆောင်မှုများ၏ပဒေသာသော်လည်း, စံ Exchange ။ သူတို့ကသငျသညျတူညီသော Yandex, ပြီးပြည့်စုံသောငွေ, PayPal က, AdvCash Paxum, Privat24 နှင့်များစွာသောအခြားစနစ်များမှ WebMoney မှတဆင့်ရန်ပုံငွေသို့ပေးသွင်းရမည်ခွင့်ပြုသည်။ သငျသညျ 100 ကျော်အွန်လိုင်းပြောင်းလဲခြင်းများစာရင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည် changeinfo ဆိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှု exchanger1 ကိုအသုံးပြုပါ။
အဆိုပါရန်ပုံငွေများကိုအသိအမှတ်ပြုပါလိမ့်မည်သည့်အပေါ်ပိုက်ဆံအိတ် WebMoney, အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်။
အဆိုပါရန်ပုံငွေများ debited ပါလိမ့်မည်သည့်အနေဖြင့်နံပါတ်သို့မဟုတ်အကောင့်;
အမည်နှင့် email လိပ်စာကို။
"box ကို Checkပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ"ထိုအခါကို click"ခွဲဝေမှုအတည်ပြု".
Method ကို 12: အာမခံ၏သိုက်၏အပြောင်းအရွှေ့
ဤနည်းလမ်းကို Bitcoin လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးအဘို့ကိုသာရရှိနိုင်ပါသည်။
"WMX နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သွားပြီးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါမယ်တော်ဆေးခန်း Enter".
"လာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကမ္ပည်းကို clickရယူ"သူတို့အခန်းပေါင်း WMX-ပိုက်ဆံအိတ်မှတပါး။
ရာနှင့် Bitcoin ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်မှတိကျသောလိပ်စာ။ အခုတော့ "သင်၏ control panel ထဲကကြောင့်ငွေကြေးကိုသွားဖို့ scrollရုပ်သိမ်းပေးရန်"ထိုအခါယခင်ခြေလှမ်းအတွက်ရရှိသောလိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ငါတို့ WebMoney လွယ်ကူသည်အကောင့်သို့ပိုက်ဆံသွင်းထားလေ၏။ ဤသည်အလွန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။